Reception Archives - Glory Assumption Space
Reception – Female – (5) Posts
၁) Reception – Female – (5) Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / အင်းစိန်မြို့နယ် ။ • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • ကားနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်။ • Reception ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ • Microsoft Word,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • Report ကောင်းမွန်စွာပေးပို့လုပ်တောင်နိုင်ရမည်။ • မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • တပတ်တစ်ရက်နားခွင့်ရှိသည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆေက်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီသည့် ကုမ္ပဏီကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Reception – Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံခြား Interior Decoration Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Reception – Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။ •	English Communication ကောင်းရမည်။ •	အသက် ( ၂၀ - ၂၆) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ချောမော ပြေပြစ်ရမည်။ •	သမိုင်းလမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	နေ့လည်စာထမင်းကျွေးသည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:30 PM ) •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Reception – Female (5)Posts/လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Reception – Female (5)Posts/လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - English စကားကိုရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အသက် ၂၀ မှ ၂၈ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Reception – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Reception – Female (5) Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Word, Excel ရရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Reception ပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Reception – Male/Female (5)Posts
Location in : သီလ၀ါ
##### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Reception – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သီလ၀ါမြို့နယ် ။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ - English ရေးဖတ်ပြောကျွမ်းကျင်ရမည် ။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Reception – Female (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ဒေါပုံမြို့ နယ်။
Location in : Dawpon
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS Company နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Reception – Female (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ဒေါပုံမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Internet/Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Reception ပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 97739 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Reception - Famale (5) Posts/Salary- 120,000 Kyats/Hlaing Thar Yar Township
Salary Rang : 120000-150000
1. Reception - Female (5)Posts / Salary – 120,000 Kyats /Hlaing Thar Yar Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ - ဖယ်ရီ စီစဉ်ပေးသည်။ စနေနေ့တ၀က်ပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် (8:30 to 5:00)
Reception- Female (5) Posts
Location in : သာကေတ
Reception – Female (5) Posts/Salary -200,000 Kyats/ Tharkayta Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - B.A (English) နှင့် ဘွဲ့ရရှိထားသူဦိးစားပေးမည်။ - English စာ 4skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
Reception - Female (6) posts / Salary -180,000 kyats (Above) .
Salary Rang : 180000 ~ 200000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂင်္လာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိသော Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Reception –Female (6) Posts / Salary – 180,000 Kyats(Above) /Mingalar Taung Nyunt Township . - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည် ။ - Reception နှင့်ပက်သက်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - Computer M&E , Excel , Internet Email ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com,gasrecruit.hr6@gmail.co Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။[caption id="attachment_1472" align="alignnone" width="424"] Young happy businesswoman talking on the phone and writing notes in office[/caption]
Reception – Femael (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။သင်္ဃန်းကျွန်းတွင်ရှိသော Interior Decoration Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ Reception – Femael (5)Posts /Salary – 180000 Kyats /Thingangyun Township - Reception ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Receptionist/Customer Service –Female (4) posts
Receptionist/Customer Service –Female (4) posts/ Salary-120,000 Kyat / Hlaing Tharyar Township - အသက် (၂၅ မှ ၃၀) ကြား - Any Bachelor Degree - နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်ရမည်။ - လုပ်ငန်း၊ Customer Service အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အတွေ့အကြုံမရှိပါကလည်း ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက လျှောက်ထားနိုင်သည်။ - MS Office, Email & Social Media (Viber,what’s app,…) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Receptionist - Female(10)posts
Receptionist - Female(10)posts/Salary- - အသက် (၁၈ -၂၂)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုပ်သက် (၁)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - တက္က္က္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမော၍ အပြောအဆိုချိုသာပြီးသွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ - English စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီး လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။
မင်္ဂလာပါရှင့်။Companyများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ Reception –F(5)Posts/Salary-120000 Kyats/Kamaryut Township ၁၀တန်း(သို.)အဝေးသင်တတ်နေသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ - ရုပ်ရည်သန်.ပြန်.ရမည်။ - CVတွင်ဓာတ်ပုံပါရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်မွန်ရမည်။ - မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ - Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com - Phone No- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 - ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန်)
Medical Receptionist /Medical Aesthetician -Female (10 ) Posts
- အသက်(၁၈-၂၅)နှစ်အတွင်း - လုပ်သက် (၁ ) နှစ် ရှိရမည်။ - တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လူမှု ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေဖြစ်သူဖြစ်ရမည်။ -ရုပ်ရည်ချောမော၍ အပြောအဆိုချိုသာပြီးသွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ - နေထိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်လျှင် စီစဉ်ပေးမည်။
Receptionist - F(1) Posts
ဘွဲ့ရ၊အသက်(၂၅)နှစ်အောက်၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ခန့်ရှိရမည်။ရုပ်ရည်ချောမော ပြေပြစ်ရမည်။စကားပြောချိုသာရမည်။အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ် သူဖြစ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်သော ဧည့်သည်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့်အသီးသီး ချိတ်ဆက်ပေးရန်။ MeetingRoomနှင့် ဧည့်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။